Zihlomule ngomfaniswano izikole zaseMbali | News24
Zihlomule ngomfaniswano izikole zaseMbali
Umnikelo uhlomulwe isikole iLungisile ngoLwesibili olwedlule.isithombe: sithunyelwe
IZIKOLE ezintathu zaseMbali Unit 2 zihlomule ngomfaniswano nezinto zokuhlanza isikole ngoLwesibili olwedlule mhla zingama-24 kuMbasa (April).
Izikole ezihlomulile kubalwa iNdabenhle Primary, iLungisile Primary neNansindlela Primary.
Zonke lezi zikole zihlomule ngemufaniswano eyi-10, ama-mop amane nemishanelo emine, okunikelwe inkampani i-Satha Business Consultant ezinze ePlessislaer njengenye yezindlela zokubuyisela emphakathini.
UNkk Futha Ngcobo oyibamba likathishanhloko kulesi sikole ubonge wanconcoza kulenkampani ngalomnikelo wathi uzolekelela kakhulu esikoleni.
“Umfaniswano sizowuhlukanisela labo bafundi esibonayo ukuthi bayawudinga ngampela. Kuzosiza kakhulu ngoba nabo bazozibona befana nabanye abantwana bakhululeke.
“Imishanelo nayo izosilekelela kakhulu ngoba besibhekene nengwadla ngodaba lokushoda kwemishanelo lapha esikoleni. Nayo sizoyihlukanisa siyihambise kulawo magumbi okufundela akade engasenazo izinto zokuhlanza,” kubeka yena.
Uqhube wathi nakuba bejabula ukuthi bathole leminikelo bayafisa ukuthi ngelinye ilanga kube khona iminikelo eyahlukile ngaphandle nje kwemifaniswano kuphela.
“Ziningi izinto abantu abangasilekelela ngazo siyisikole ngaphandle kwemifaniswano.
“Ngisho kungabe ama-computer amadala siwanikelelwe abantu abangasawadingi ngoba siyawadinga kakhulu esikoleni. Lesi sikole sike sabhekana nesihlava esibi sokugqekezelwa manje izinto eziningi azisekho yingakho sithi singalujabulela noma yiluphi usizo esingaluthola emphakathini nakosomabhizinisi.”
Kuyanda ukubulawa kwabantu eMbali
Eben Etzebeth's cousin in the dock over 2019 Langebaan brawl
40% - 6543 votes